Otu esi eme ka uzo di nma karia iji akwukwo asaa SEO Tips from Semalt
Twitter mere nkwekọrịta na Google nke mere ka tweets 140 nwere ike ịchọpụta ya n'ịntanetị. Mgbe e mesịrị, Twitter nyere Google ohere zuru oke na tweets niile, nke a maara dị ka "Firehose." Google kachasị ebe bara uru na ikike mmadụ na ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ dị ka ihe kachasị mkpa ma họrọ ihe ederede. N'ihi ya, ịnweta ọnụnọ dị na Twitter dị mkpa ma chọpụta na ọ dị mkpa. Na nke a, Jack Miller, Onye Nlekọta Ndị Nlekọta Ọrụ nke Semalt , na-enye ndị na-esonụ twitter ndụmọdụ iji tinye aka na ahịa:
Art nke Keywords
Nọgide na-ejide onwe gị site na iji okwu yiri nke ahụ ga-apụta na weebụsaịtị. Hashtags melite ọchụchọ ahụ ma nyere aka nye ndị mmadụ aka ọdịnaya. N'ịtụgharị mkpụrụokwu n'ime ụfọdụ hashtags, ọ ga-abịa na aka mgbe ndị mmadụ na-achọ isiokwu ụfọdụ - feuille de temps en ligne. Ejila ihe nhicha na-arụ ọrụ na otu tweet dị ka o nwere ike ile anya spammy ma gbanwee ndị na-eso ụzọ. Jide n'aka na ị ga-enyocha ihe nkedo ndị nwere aka, mmasị, ma ọ bụ retweets ma jiri ha mee ka profaịlụ gị. Nchịkọta Twitter kwesịrị inyere aka ịchọpụta ihe kasị mma maka azụmahịa ahụ. Gbaa mbọ hụ na tweet nwere ọtụtụ nkọwa zuru ezu na ya, na ọtụtụ ụdị mgbasa ozi nke nwere ike itinye ihe odide 140.
Na-ebuli Profaili maka SEO
Ijide n'aka na njikarịcha nke profaịlụ gị na-eme ka o sie ike. Mgbe ndị ọrụ na-eji nọmba na aha njirimara ha ma ọ bụ aka ha, ha nwere ike na-emetụta ihe abụọ dị na profaịlụ nke azụmahịa, dị ka Google ga-emeso ha dị ka spam.
Agbanwe ntughari ma ọ bụ aha njirimara dị mfe..Otú ọ dị, ndị ọkachamara adịghị enye ndụmọdụ ya ka ọ na-agbagha ndị ọrụ ebe ọ bụ na akara nkwado ahụ ejiri aha ahụ laa. Ihe nkesa nyocha bụ ihe ndị ọrụ na-adabere na ịkọ ma profaịlụ ọ gụnyere ozi ziri ezi na nke a kwadoro banyere ụlọ ọrụ azụmahịa ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ mmadụ.
Google na-emekwa ka isi ihe na-edepụta mkpụrụ ndụ dị na ntanetị Twitter. Na bio na-agwa ndị mmadụ ihe ị ga-atụ anya site na tweets na-abịa site na otu profaịlụ. N'ime mkpụrụ okwu 160 nyere, ịdị mfe na nkenke bụ ezigbo ndị enyi gị. Gwa ụzọ kachasị mkpa n'ụzọ dị mfe ma cheta na ị ga-agụnye ọkwa. Ọ bụrụ na enwere akaụntụ ndekọ ndị ọzọ, gụnye otu ihe ahụ maka ha niile ka ha wee hụ na ị ga - eme mgbanwe maka ndị ọrụ.
Gbanwee foto profaịlụ
Tupu ịmepụta foto ahụ, jide n'aka na ịhazi aha njirimara ahụ. Atụmatụ ole na ole dị na nke a bụ iji hụ na ọ nwere mkpụrụokwu dị mkpa, ma ọ bụ kewapụ isiokwu ndị ahụ site na iji mgbatị nke mere ka ọ dịkwuo mfe ịkọwapụta site na search engine .
Njikọ aka weebụsaịtị
Dịka ọ bụla mkpọsa SEO , a ghaghị ịkpọ oku maka ọrụ maka onye ọbịa nke bụ njikọ njikọ weebụsaịtị na Twitter ga-abụ. Kpebie ihe nke ibe weebụ kachasị mkpa maka ozi enyere na profaịlụ, na ebe onye ga-achọ iziga ndị na-eso ụzọ ha. Njikọ ndị mmadụ na - emekwu okporo ụzọ ma na - emekwuwanye ihe.
Mweghachi akwụkwọ na-enyere aka mụbaa okporo ụzọ, n'ihi ya, ị nwere ike ịnwe onwe gị mgbe ị na-arịọ maka ịkekọrịta. Iji nweta ohere maka nlele, dee mmelite dị mkpirikpi ka ọ na - enye ndị mmadụ ohere ịgụnye ihe ma ọ bụ kwuo ndị ọzọ mgbe ị na - emegharịghachi.
Gụnye profaịlụ mmekọrịta na nsonaazụ ọchụchọ
Gbalịa ịkọwapụta nke n'ime profaịlụ mmekọrịta mmadụ na ya bụ nke kachasị amasị ma gụnye koodu nchịkọta weebụ.